အထောက်အထားများ (RNDP @ Aye Mg) | Ko Rohingya
ကျွန်ုပ်တို့၏ Burmese Muslim Youths For Human Rights and Justice အစည်းအရုံး (Group)မှနေ၍ RNDP ပါတီထံသို့ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲအား တက်ရောက်၍ ပါရဂူဘွဲ့ရ နိုင်ငံတကာ သမိုင်းပညာရှင်ကြီးများဖြစ်ကြသော ပါမောက္ခ Dr Abid Bahar နှင့် ပါမောက္ခ Dr. Habib Siddiqui တို့နှစ်ဦးနှင့် မျက်နှာစုံညီ ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ရန်အတွက် RNDP ပါတီ ဌာနချုပ်၏ အီမေးလ် (rndp.sittway@gmail.com)မှတဆင့် တရားဝင် ဖိတ်ကြားလွှာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၁) ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၁) ရက်နေ့အထိ ၎င်းတို့ပါတီထံမှနေ၍ အကြောင်းပြန်ကြားချက်တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိပါသောကြောင့် နည်းပညာ အခက်အခဲကြောင့် ၎င်းတို့အနေနှင့် လက်ခံရရှိခြင်း မရှိခဲ့ခြင်းလောဟု စိုးရိမ်သံသယဖြစ်မိသောကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ စာတိုက်တွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ၍ ၎င်းရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ၏ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်ထံသို့ ထပ်မံ၍ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ စာတိုက်တွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ၍ အထက်ဖော်ပြပါမိတ္တူကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း ဒီမိုကရေစီ နည်းစနစ်နှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး သိရှိနိုင်စေရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးလိုက်ပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီး
This entry was posted on February 6, 2013, in စိန်ခေါ်မှုများ, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice and tagged စကားစစ်ထိုးပွဲ, စစ်အာဏာရှင်, စိန်ခေါ်မှုများ, တိ/ကု အေးမောင်, တိုင်းရင်းသား, ရခိုင်အကြမ်းဖက်ပါတီ, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, သမိုင်း, သမ္မတ, ဦးခင်ရီ, ဦးသိန်းစိန်, တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကြီး, ဒေါက်တာအေးမောင်, ကြေညာချက်, မြန်မာ, Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice, Dr Abid Bahar, RNDP ပါတီ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← RNDP ပါတီနှင့် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲ	သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ သမ္မတရုံးဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ပေးပို့ခဲ့ပြီးသော အိတ်ဖွင့်ပေးစာ →